Amatende Okukhiqizwa Kwezinsimbi Zokwakhiwa Kwamasiko, iStake Airbag, Ipaki Lamanzi Athengiswayo | Intokozo Iyakwehliseka
Izakhiwo zamatende ezisebenza ngezifiso ezifekthri futhi ipaki lamanzi alishisayo- i-Joy inflatable.
Ipaki lamanzi elivuthayo
Itende le-IGloo elivumelekile
Itende elikhulu elingenakushibilika
Itende Lokukhangisa Elivuthayo
Itende elisezingeni eliphansi
Itende le-bubble elingavundukayo
I-Aflotable Stunt Airbag
Itende le-Cube elivumelekile
Ipaki Lamanzi Elingenakugeleza
I-0,9mm PVC tarpaulin coated vinyl
Isisindo esingu-30 ° 30 m: 1500kg
IJOO ikhiqiza ngobungcweti ipaki lamanzi elinwebekayo, amatende angashisi kanye ne-stunt airbag kusukela ngo-2001.
Imikhiqizo eyinhloko ifaka isilayidi samanzi eshibilikayo, ipaki lamanzi elintantayo, ukuqhuma kwetende, ezemidlalo ezinokufudumala, isikhwama somoya esinamandla, ukukhangisa okungenazindleko, njll.
I-PVC Outdoor dome camping bubble Ihhotela elisezingeni eliphansi le-crystal tende elizothengiswa
I-PVC Air Air Outdoor dome camping Tree Ihhotela Luxury Inflatable Sula itende le-crystal liyathengiswa. Sula Bubble Tech Professional Professional Professional ukhiqiza itende eliphezulu elisezingeni eliphansi elikhanyayo. Itende elicacile le-bubble linezicelo eziningi njengokukhempa, amahhotela, imicimbi yeqembu. Singakwazi ukwenza amatende acwebile amatende kumasayizi ahlukene, wamukelekile ukuxhumana nathi, amatende avuthayo we-bubble ayathengiswa.
I-Flatable Airtight Bubble Dome Clear Clear for Outdoor Lawn Camping
I-Flatable Airtight Bubble Tex ye-Dome Tent ye-Outdoor Lawn Camping. Intokozo evuthayo ikhiqiza zonke izinhlobo zama-actitight inflatatables yamakhasimende emhlabeni wonke. Uma ufuna amatende acacile ukukhempa, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi, amatende angenakuvukwa avumelekile athengiswayo.
I-Flotatable Sula Ama-Bubble Cabins Ballon Tende for Camping
Itende elisezingeni elicacile le-bubble delome ye-bubble for yangaphandle. I-Joy Flatable Bubble Cabins ithengiswa kahle kakhulu ezimakethe zamazwe aphesheya futhi ithandwa ngamakhasimende amaningi. Inokusetshenziswa okuningana, njenge-balloon tende yokukanisa, itende lakwaTotn elivuthayo, njll. Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuthola amanani.
I-Snowboard Airbag Landing Pad Security Air Bag Egwining
I-Snowboard Airbag Landing Pad Pad Ukuphepha Air Bag jump + https: //www.joyinflatable.com
Ukuhlela: Izidingo zamakhasimende ajwayelekile kanye nezinto ezikhathazayo; Qinisekisa isitayela, umbala, usayizi, ukwenziwa kwemikhiqizo kanye nesabelomali sekhasimende; Ngokuya ngezidingo zamakhasimende nokukhathazayo, xoxa ngenkomba noma okusalungiswa.
Isixazululo: Yenza imidwebo engu-3 D ihambisane nemfuno yekhasimende; Thola isixazululo bese uthuthuka; Khiqiza i-oda lokukhiqiza ngenothi ekhethekile kusixazululo.
Ukukhiqiza: Ngokusho komyalo wokudweba ukudweba umdwebo nokwenza; Landela uhlelo lokukhiqiza bese uthatha amavidiyo ahlobene namakhasimende aqinisekisa; Hlola umkhiqizo bese uthatha ividiyo ngesikhathi sokuhlolwa.
Ngemuva kokuthengisa / Impendulo: Thumela amavidiyo ahlobene futhi uxhumana namakhasimende; Ukulethwa; Khokhela ukubuya kwesimo sokusebenzisa.
Wonke la mavidiyo adutshulwa lapho sihlola imikhiqizo engenakonakala yiqembu lethu lokudutshulwa, noma impendulo yamakhasimende ethu bese idutshulwa endaweni yesehlakalo. Kakhulu kukhombisa ukwakheka, ukwakheka, ukusebenza, umbala kanye nokusetshenziswa kwemikhiqizo yethu. Ngaleyo ndlela kusifanele ukuba sithuthukise….
IGuangzhou Joy inflatable Limited iyimboni ekhethekile epaki lamanzi ayingozi, amatende anwebekayo futhi ne-stunt airbag. Singakunika ikhambi elenzelwe indawo yakho. Lokhu kungaba yinhlanganisela yomkhiqizo ohambelana nawe nemingcele ethile, isabelomali nobukhulu. Ngokuhlangenwe nakho kwethu kusuka eminyakeni eyi-10 edlule emazweni angama-50, Siyazi ukuthi isiphi isethaphu esinengqondo ngokuya kobumnandi nokusebenza.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi emikhakheni yezokuzijabulisa, imibukiso, i-adventure, inselelo enkulu yokusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle, kanye namapaki amanzi njll, ukuzijabulisa / injabulo / ezemidlalo / izindawo zokuvakasha nezinye. Siyazi, ukuthi phambili komgwaqo, kunamathuba nezinselelo, imincintiswano nokubambisana. Kepha sikholwa ukuthi ulwazi olusha kanye nobuchwepheshe buzobamba iqhaza elibalulekile endleleni yentuthuko njalo nokwenza izinto ezintsha,
siqinisekisa ukuthi singanikela ngemikhiqizo efanelekayo futhi enhle engabizi kakhulu, ngokususelwa kubasebenzi bethu abanolwazi, imishini ethuthukile kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile.
Xhumana nathi Thola Idizayini Yemahhala
Ikhethekile ematendeni angashisi kakhulu futhi ngokwezifiso zamapaki okuntanta emanzini. Sinikezela ngokwezifiso ezahlukahlukene ezinjengombala, usayizi, isitayela, ukwakheka kokubukeka, umsebenzi wokushicilela, ukuphrinta, njll. Nge-SGS, CE, UL kanye nesinye isitifiketi sobungcweti bempahla nemikhiqizo.